यी ४ कारण होन्डा साइन नेपालमा धेरै बिक्री भयो - Arthapage
यी ४ कारण होन्डा साइन नेपालमा धेरै बिक्री भयो
प्रकाशित मितिः १६ कार्तिक २०७७, आईतवार ०७:५२ November 1, 2020
काठमाडौं । सन् २००६ बाट बिक्री सुरु भएको होन्डाको चर्चित कम्यूटर मोटरसाइकल सिबी साइनले नेपालमा बजाज पल्सरपछि सर्वाधिक सफल मोडलको पहिचान बनाउन सफल भएको छ ।
बजाज पल्सर १५० सीसीभन्दा माथिको सेग्मेन्टमा मात्रै उपलब्ध रहेको समयमा नेपाल आएको होन्डा साइनको सफलता धेरै मोटरसाइकलप्रेमीले अनुभव गर्न पाएका छन् ।
सन् २००८ ताका होन्डा सिबी साइन किन्न चाहने ग्राहककले २ महिनासम्म पर्खनु पर्ने अवस्था रहेको थियो । उत्कृष्ट डिजाइन, धेरै माइलेज, होन्डाको विश्वसनिय इन्जिनको कारण धेरै मानिस होन्डा साइन किन्न लालहित रहने गरेका थिए ।
करिब १ लाख २९ हजार ९०० मूल्यबाट नेपालमा बिक्री सुरु भएको होन्डा सिबी साइनको अहिले मूल्य बढेर २ लाख ९ हजार ९०० र सिबी साइन एसपीको २ लाख ३१ हजार ९०० रुपैयाँसम्म पुगिसकेको छ ।
अहिलेपनि होन्डा साइनको क्रेज घटेको छैन । होन्डाको आधिकारीक वितरक स्याकार ट्रेडिङले वार्षिक १६ देखि २० हजार यूनिट साइन बिक्री गर्दै आएको छ । यस्तोका यो मोटरसाइकल यति धेरै सफल हुनुको पछाडि रहेका केहि कारण खोज्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ ।
डिजाइन र लुक्स
सन् २००६ मा होन्डा साइन जस्तो सार्प लुक्समा कुनैपनि कम्यूटर मोटरसाइकल थिएन । भनौ अहिलेपनि यो सेग्मेन्टमा नै निकै आकर्षक लुक्स भएको मोटरसाइकल सिबी साइन नै हो ।
यसलाई सहरी क्षेत्र र ग्रामिण भेग दुबै बाटोमा चलाउन निकै सजिलो थियो, जुन अहिलेपनि यहि क्षेत्रमा धेरै बिक्री हुन्छ । अझ तराई भेगमा त यसको प्रयोग सजिलो हुने नै भयो । निकै फेन्सी फिचरको साथ तयार भएको यो मोटरसाइकल बजारमा निरन्तर सफता चुम्दै आएको छ ।
अहिलेपनि योसँग सिधा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अर्को मोडल छैन भन्दा हुन्छ । यद्यपी बजाज पल्सर १२५, टीभीएस स्टाइकर, हिरो स्प्लेन्डर र यामाहा सलुटो यो सेग्मेन्टमा रहेका छन् ।
सहज र सस्तो सर्भिङ
होन्डाले नेपालमा आफ्नो सर्भिस नेटवर्क निकै धेरै स्थानमा संचालन गरेर सर्भिस सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै होन्डाले आफ्नै जेन्यून पार्टसमा सुरुदेखि नै लगानी गर्दै आएकाले साइनको कुनैपनि पार्टसको लागि समस्या भएन । साथै पार्टसको मूल्यपनि निकै कम रहेको हुँदा होन्डा साइन खोज्ने बढ्दै गएका हुन् ।
होन्डाले साइनमा दिएको १२४.७ सीसी क्षमताको इन्जिनले अधिकतम ७५०० आरपीएममा १०.५७ बीएच पावर र ५५०० आरपीएममा १०.३० एनएम टर्क प्रदान गर्छ ।
किक र सेल्फ स्टार्ट दुबै अप्सनमा उपलब्ध सिबी साइनमा १०.५ लिटर क्षमताको इन्धन ट्यांक दिइएको छ । यसले धेरै ग्राहकलाई तान्न सफल भएको हो ।
अविश्वसनिय रिसेल भ्यलु
होन्डाका मोटरसाइकल नेपालमा सर्वाधिक रिसेल मूल्य आउनेमा पर्छन् । त्यसमा पनि होन्डा र हिरो भारतमा छुट्टिएपछि नेपालमा पनि दुबै कम्पनी फरक भएका हुन् । यस्तोमा पहिला हिरो होन्डाका उत्पादनले पाउने रिसेल भ्यालु पछि होन्डाका उत्पादनले पाउन थाले ।
होन्डा साइन सर्वाधिक रिसेल मूल्य पाउने मोटरसाइकलको लिष्टमा अग्रस्थानमा रहन सफल भयो । जसले साइनको बिक्री बढ्नुमा निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्यो ।
प्रकाशित मितिः १६ कार्तिक २०७७, आईतवार ०७:५२ |
Prevके हो संयुक्त घरकर्जा ? दुई जनाको नाममा ऋण लिँदा के फाइदा हुन्छ ?
Nextकर्णालीका मन्त्री दल रावल-३२ महिनाको अवधिमा सहयोग गर्नेप्रति आभारी छु